ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး	53
Posted by Wow on Mar 6, 2015 in My Dear Diary | 53 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ “ငယ်အိမ်မက်” ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပီး နဲနဲ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သီအိုရီပိုင်းကိုတော့ ပညာရှင်တွေအကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်… ကျနော်ကတော့ ကျပ်မပြည့်သူ အူတူတူမို့ ဥာဏ်မှီသလောက်ပဲ တွေးပါတယ်…
ကျနော်တို့ကျောင်း အလယ်တန်းလောက်မှာထဲကသင်ရသလို အောက်ဆီဂျင်ဆို O2 ၊ ရေဆို H2O….
မော်လီကျူးလေးတစ်ခု လျော့သွားလို့ဖြစ်စေ၊ ပိုသွားလို့ဖြစ်စေ… structure ပျက်သွားရင် အောက်ဆီဂျင်က အောက်ဆီဂျင် မဟုတ်တော့သလို၊ ရေကလဲ ရေမဟုတ်တော့ပါဘူး….
အနော်အောက်ဆီဂျင်ခမျာ… အောက်ဆီဂျင်အဖြစ်နဲ့လူသားတွေကို အကျိုးပြုဖို့ အရမ်းကြိုးစားခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကံကြမ္မာ က မျက်နှာသာမပေးလို့ မော်လီကျူးတွေပိုလာပီး CO2 ဖြစ်သွားတယ်… အနော့်ကို အောက်ဆီဂျင်လို့ပဲ သဘောထားပီး ရှုပေးဂျဘာာာာ… ရမလား… လာဇတ်နာမပြနဲ့ ဘူသူမှ အီးမရှုဘူး ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်တုံးက ကျနော်တို့ရုံးမှာ မြို့သစ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး ပရောဂျက်တစ်ခု ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ Water Supply Plant အတွက် နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်းကိုသုံးကြပါတယ်။
ရေအရင်းအမြစ်သိုလှောင်ရေးအတွက်ကော၊ ရေပေးဝေရေးအတွက်ပါ၊ ပရောဂျက်ဧရိယာက မြေကြီး Soil Test လုပ်ထားတဲ့ ဒေတာတွေ၊ ရယူရမဲ့ရေကို test လုပ်ထားတဲ့ဒေတာတွေ၊ ground survey ဒေတာတွေအကုန်လုံး ကို ဆော့ဖ၀ဲထဲ ထည့်၊ အဲ့ဒီ့ ဆော့ဖ၀ဲကမှ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်နှစ်မီတာ အနက်တူးရမယ်၊ ပိုက်အထူဘယ်လောက်သုံးရမယ်၊ pressure ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပြန်တွက်ပီး ဒီဇိုင်းပြန်ထုတ်ပေးတာကို ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်းလို့ ခေါ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ရုံးက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ရှင်းပြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ Tap Water က သောက်လို့ရအောင်သန့်တာမို့၊ သူတို့ Water Supply System မှာ ရေ သန့်စင်ဖို့ အရမ်း ဂရုစိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရေသန့်စင်မှုကို ပျက်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ရေ pressure များရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်မြုတ် ထားတဲ့မြေကြီးပေါ်က ဖိအားကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်ရဲ့ materials တစ်ခုခု ရေမှာပျော်ဝင်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေမော်လီကျူးပုံစံ ပျက်ပြီး၊ ရေသန့်စင်မှုမရှိတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့…. အဟွတ်… အဟွတ်… အဟမ်းးးးး လိုရာဆွဲပြောရရင် အချစ်ဆိုတာလဲအဲ့လိုပဲလိုကျနော်ထင်ပါတယ်…
မည်သည့်အရာမဆို မိမိဂုဏ်သတ္တိပျက်သွားရင် ဘ၀ပျက်တာပါပဲ… ဆိုလိုတာ မူရင်းဘ၀ ပြန်ရဖို့ခက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက quality control ကိစ္စပေါ့နော်၊ တွင်းထွက်ဆိုရင် ရှားပါးရမယ်၊ အရောင်ကနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရမယ်၊ မာကျောမှုအဆင့်တစ်ခုရှိရမယ်… အဲတာမှရတနာ လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်…
အချစ်အဆင့်အထိရောက်မလာတဲ့ အချစ်ကို ကျနော် အချစ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး…
“He’s just not that into you” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုကျနော်ကြည့်ဖူးပါတယ်…
“သူက မင်းကို စိတ်ဝင်စားမနေပါဘူး” လို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်… ကိုဘလှိုင် ဆိုရင်တော့ ပိုလှအောင် ဘာသာပြန် တတ်မယ်….
ယောက်ကျားလေးတွေ သဘာဝကိုပြောထားတဲ့ ကားလေးပါ။ မိန်းကလေးတွေကသာ စိတ်ကူးယဉ် စိတ်ခံစားမှုကို ဦးစားပေး အသေးအဖွဲလေးတွေ အလေးအနက်ထားချဲ့တွေးပေမဲ့၊ ယောက်ကျားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံက အဲ့လောက်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး အလုပ်မလုပ်ပါဘူး…
သူတို့ချစ်တယ်ဆိုရင် ချစ်တဲ့မိန်းခလေးဆီရောက်အောင်လာပါတယ်… ချစ်တော့ချစ်တယ်… မလာဘူးဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေးပဲ လာလောက်အောင်မချစ်လို့ပါ…
လိုချင်တဲ့မိန်းကလေးကို ရအောင်ကြိုးစားပါတယ်၊ မကြိုးစားဖူးဆိုရင် ရှင်းရှင်းလေးပဲ ကြိုးစားရလောက်အောင် မချစ်လို့ပါ….
အရည်အချင်းမမှီတဲ့ အချစ်မဟုတ်တဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကားထဲမှာတော့ ဇတ်သိမ်းကလှပါတယ်…. Exception တစ်ခုအဖြစ် ပျော်ရွင်စရာ ဇတ်သိမ်းခန်းတစ်ခုပေးထားပါတယ်…
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာလဲ Exception တွေ အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်… ကျနော်တို့ လက်ခံနိုင် လက်မခံနိုင်ကတော့ ကျနော်တို့အပိုင်းပေါ့လေ…. ချွင်းချက်တစ်ခုကြောင့် အခွင့်အရေးတစ်ခုရတဲ့အခါ….
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ….
နိအာ့ဂျောင့် ယောက်ကျားမရတာလို့တော့ မပြောဂျနဲ့နော်… About Wow
တောင်ပေါ်သား says: တော်တာဗျာ
မိုက်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: မလိမ်မာဝူး လူဇိုးမဂျီးလို့ ပေါချင်တာလားငင်င်င် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: အဝှာမပါဒဲ့ အခြစ် ဆားမပါဒဲ့ဟင်း ချားရသလိုပဲ မီကောင်း မီကောင်း…
Kaung Kin Pyar says: အချစ်အဆင့်အထိရောက်မလာတဲ့ အချစ်ကို ကျနော် အချစ်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး…
အချစ်အဆင့် သတ်မှတ်ချက်က နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးမယ် ထင်တယ်….။ ဘယ်လောက်ကို ဘယ်လိုမျိုးကို သတ်မှတ်တာလဲ ခုထိ မသဲကွဲသေးဘူး….။
Wow says: ခု… ရဘီလားးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ၀ိုးရယ် နင်လည်း ငါနဲ့ တူတူပဲ တသက်လုံးတယောက်ထဲသာ နေတော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: နာတို့နှစ်ယောက်ယူဂျမယ်လေ… လူမိုက်ခင်ဇော် မသိစေနဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဘာ။
နိ ပို့(စ) မြင်လို့ ရွာထဲ ဝင်လာတဲ့သူ ရင်ကို ဒီလို ခြေစုံကန်ရသလားး ပို့(စ) ထဲမှာ မောင်လေး လှိုင်ကို ဖျာရောင်းထားတာလည်း ဖျက်ပေးဘာ။ ~~~~~~~~~
နာ့ အဖို့ကတော့ အချစ်ဆိုတာနှိုင်းဖို့ ဘာ ဥမပါမှ မရှိပါဘူးး
အဲဒီလူကို မချစ်ဘူးဆိုလည်း မချစ်တော့ပါဘူးးး
ဆိုတော့ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းဟာလည်း မတည်မြဲတဲ့ နာ့ရဲ့ အရူးစိတ် (အဲလေ) နာ့ရဲ့ မတည်ငြိမ်တဲ့ စိတ်အပေါ် မူတည်နေတဲ့ ခံစားချက်မို့ …..
ဖြစ်- ပျက် ပေါ့လေ။
Wow says: အဟွာလေ.. မယ်ပုကိုက လဂါးစတာ… ရမားလို့ မောင်လေးလှိုင်ဆိုတာ မိုးလေးကို ပေါဒါလား အဟွတ်…. အချစ်ကတော့ ဟွာလေ သူများကိုယ့်ချစ်မချစ်ဆိုတာတော့ တိုင်းရမာပေါ့ ကွကိုယ်တော့ ချိန်ခွင်ထဲ ဘယ်ဝင်ထိုင်မလဲ… နာက လူလည်ပါ Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အေး ကောင်းတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဟေးးးးးး နာစွံဘီကွ Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ခု ရသွားဘီ…
Wow says: ရရင် ဟုတ်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး
ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ရလို့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာမျိုး မဟုတ်ရင် တော်ပြီ
ဘာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုပြီး မဖြစ်ရင် တော်ပြီ
ဖြစ်လေရာဘဝ ဖြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့ ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်ပါဇီ ဝိုးမမရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အာ့ဆို နိကတော့ ဖစ်ချင်ရာဖစ်နေတာပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ဘာမှကို မဖြစ်တာ
naywoon ni says: ဘာမှ မဖြစ်​တဲ့​နောက်​ ဘာများဖြစ်​​စေ့ချင်​လို့လဲကွယ်​ ။
ဒီစကားနဲ့ ပတ်​သက်​လို့ နဲနဲ ၀င်​အထွန့်​တက်​လိုက်​ဦးမှနဲ့ တူရဲ့ ။။အရင်​က​ပြော​နေတဲ့ စကား ” တစ်​ကယ်​ဖြစ်​ချင်​ တစ်​ကယ်​လုပ်​ ” တဲ့ အဲ့က ကာလ​ရွေ့​လျောသွား​တော့ “ထိုင်​​နေလို့​တော့ ဘာမှဖြစ်​မလာဘူး ” တဲ့ နဲနဲအား​ပျော့သွားပြီ ။ ခု ​နောက်​ပိုင်း” ဘာမှမဖြစ်​ရင်​ ဘာမှမဖြစ်​ဘူး” တဲ့ ။ ​စေတနာမပါတဲ့ ၀န်​ထမ်း​တွေ ​ပြော​လေ့ရှိတဲ့ စကား ။ အလုပ်​လုပ်​ချင်​သ​လောက်​လုပ်​မယ်​ ။ လာဘ်​ စားချင်​စားမယ်​ ။ ဘာမှ ( ပြဿနာ ) မဖြစ်​ရင်​ ဘာမှ မဖြစ်​ဘူး ဆိုတဲ့ စကား ။။( ပြဿနာ ) ဖြစ်​ရင်​​တော့ ( တစ်​ခုခု ) ဖြစ်​သွားနိုင်​သ​ပေါ့​လေ ။
“အချစ်​ဆိုဖြစ်​ဖို့ ကိုယ်​ခံအားနည်း​နေဖို့လိုတယ်​ ” ( ဘယ်​သူ​ပြောသွားသလဲ လိုက်​ရှာမ​နေနဲ့ ခုမှ “​နေ၀န်းနီ “​ပြောတာ ) အဲ့ ဒိ​တော့ အချစ်​မ​တွေ့​သေးတာ ကိုယ်​ခံအား သိပ်​​ကောင်း​နေတယ်​လိုပဲ မှတ်​ယူလိုက်​​တော့ ၀ူး ​ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဟယ် အာ့ဆို အနော်က ရမ်းရမ်းဂျီးကို တော်နေတာပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ဟယ် အဘနီ အဲ့ဒါတကယ်လား ၀မ်းသာစရာပဲ
ငါကွ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ခင်ဇော် says: ဘယ်နဲ့ လဗျိုဂျီး ပြောတာ အဟုတ်မှတ်မနေကြနဲ့ ဒီ နှစ်ကောင်။
နာ ပြောတာ နားထောင်။
သဘာဝတရားကြီး က ပေးထားတဲ့ ကိုယ့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို အသုံးမပြုရင်သော်လဂေါင်း
အသုံးပြုလွန်းအားကြီးရင်သော လဂေါင်းး ကင်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။
နင်တို့တွေ ၂ လုံး ကင်ဆာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။
Wow says: အာ့ချို ချွိပေါဒဲ့အတိုင်းးး ကင်ဆာဖြစ်မှာ ကြောက်လို့ပါ… Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: အာ့ဆို နာလည်း ကြောက်တယ် ဆွိစကားပဲ နားထောင်မယ် Was this answer helpful?LikeDislike 522
ဂျက်စပဲရိုး says: အသိ ဦးလေး တစ်ယောက် ပြောဖူးတယ်။
မိန်းမယူတယ် (အိမ်ထောင်ပြုတယ်) ဆိုတာ အဲ့လို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ
လူက နည်းနည်းလေးတော့ မိုက်ရူးရဲ ဆန်ပေး နေမှ တဲ့။
အစဉ်းစား လွန် ကုန်ရင် အဲ့လို ကိုယ်ခံအား တွေ သိပ်ကောင်းလွန်း ကုန်မယ် ပေါ့လေ။ :P :P
မြစပဲရိုး says: မိုက်သဗျာ အဘနီ ရာ။
မြစပဲရိုး says: သီအိုရီ တွေ ပိုက်ပြီး ပြန်လာမယ် ဟေ့။ အခု တော့ ပြေးရဦးမယ်။ lol:-)))))
Wow says: ဘယ်ရမလဲ ချစ်အရီးလေးကို ထောင်ဖမ်းနေတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စိတ်ညစ်တယ်။ အပျိုကြီး သုံးယောက်ကို စကားတစ်ခွန်း တိုးတိုးလေး ပြောမယ်။
.(မှတ်ချက် – ရွာသားများ မကြားစေရ။ )
.နောက်တော့မှ ယောက်ျားနိုင်နည်း ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ပေးပါဦးမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သီဝရီပိုင်းပေါ့။
Wow says: အိုက်ပို့စ်လေး စောင့်ပီးမ ယောက်ကျားယူရမာပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .အချစ်လား…သူဖျားနေတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အချစ်​လား ဒီအိမ်​မှာ မ​နေတာကြဘီ
အချစ်​လား​ဟေ့ ၀င်​ခဲ့​လေကွယ်​ ။
Alinsett@Maung Thura says: အချစ်ဆိုတာ အတဲ့သူတွေ ချစ်တာဆိုပဲ…
အမှန်တော့ အချစ်ဆိုတာ… အဟုတ်တကယ်ထင်မိတဲ့ အချိန်တကွေ့မှာ ချစ်မိတယ်ထင်မှတ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုလေးများလားလို့…
ပြီးတော့… ပဝါပါးပါးလေးသာ ခြားတဲ့ မုန်းစိတ်နဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်း ဒီဘက်ခြမ်းက အရာလေး…
padonmar says: ဘာသီအိုရီမှ မရှိတော့ ဘာမှလည်း မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကွယ်။
Wow says: အေးအေးချမ်းချမ်း ကြာခွက်စားနေတာပဲကောင်းပါတယ် တီဒုံရာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အောင်မြလေး။ CO2 ကိုများ အပေါစား မှတ်လို့လား။
သစ်ပင်တွေ အတွက် အကြိုက်ပါလေ။
သီချင်း ထဲ က သီဝရီ နဲ့ ပြောမယ်။
စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုခဲ့တဲ့ “ဒီထက်ပိုပြီး မတတ်နိုင်ဘူး” ထဲ မှာ
လူတိုင်း ချွတ်ယွင်း ချက်ရှိမယ်၊
သဘာဝရဲ့ သဘောတရား တစ်ခုပါဘဲ၊
ပုံစံ တခုထဲ ဇွတ်အတင်းသွတ်သွင်းနေရင်
နဂိုရှိရင်းစွဲ ဂုဏ်အင်ပျက်စီး မဲ့ အရေး
အပင်မြင့် လဲ အဖျားရှိရမယ်
ဒါပေမဲ့ လဲ တိုင်းလို့မရစကောင်းနိုင်တဲ့
မင်းမတောင်းရဘဲ ကိုယ်ပေးအပ်ခဲ့တာလဲ မင်းအသိပါဘဲ”
“ဒီထက်ပိုပြီး မင်းအလို ကို မလိုက်နိုင်ဘူး”
သီချင်း ထဲ က သီဝရီ အရ ဆိုရင်ပေါ့လေ။
တို့မိန်းကလေး တွေ က မှန်းထားတာ နဲ့ ကိုယ်တော်များ လုပ်နေတာ တွေ က လွဲ နေတတ်သကွဲ့။
တစ်ချို့ ဇွတ်ကပ်ပြီး ချွဲတတ် တဲ့ ဟာမျိုး တွေ က ရေရှည် မမြဲတတ်ဘူး။
တစ်ချို့ တစ်ခွန်း ဘဲ ပြောပြီး ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ဘဲ နေပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှိတတ်တယ်။
ကိုယ့်ကို ပရက်ရှာ မပေးတဲ့ သဘောလဲ ပါမှာပါ။
ဒီတော့ သူ့ရဲ့ တုံးတိတိ ပီယဝါစာချစ်ဖွယ်သောစကား မပြောတာ ကို အတင်း တွန်း ပြောခိုင်းမိရင်
သူရဲ့ နဂို ရှိရင်းစွဲ ဂုဏ်သတ္တိ လေး ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ကို သဲသဲလှုပ် မကပ်တိုင်း အမှန်တကယ် မချစ်ဘူး လို့ ကောက်ချက်ချဖို့ ခက်သား။
သူ့ရဲ့ တစ်ခြား အမူအကျင့် တွေ ဓလေ့စရိုက် စိတ်ဓာတ် တွေ ကိုလဲ ပလိုဂရမ် ထဲ မထည့်ဘဲ run လိုက်မယ် ဆိုရင် အဖြေမှန် မရ ဘူး လေ ကလေးမလေး ရဲ့။
အန်တီLove Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နာ သာဆို
အရီးး မန့်သော် လည်းးကောင်းးးး
အဲလို ထဲ က တစ်မျိုးးး မဟုတ် တစ်မျိုးးး နေတတ်မှ…
နိ ဟာ နာ့ ပေါက်ကရတွေ ဆို အမြဲ ဟိုင်းးလိုက် လုပ်တယ်..
Wow says: ပြောရင်မယုံဝူး နောက်တယ်ထင်တယ်… နာက ပေါက်ကရအဆင့်ပဲရှိပါဒယ်ဆို.. သိပ်အလေးအနက်ကြီးတွေ တွေးမျအူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဆိုလိုတာက ဘီလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် … ဟီးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကျနော့်ထက် ပညာအားဖြင့်ကြီး တဲ့လူကြီးတွေကို နောက်သလိုဖြစ်နေရင် ခွင့်လွတ်ပါ၊ တီဒုံတို့ အရီးတို့….
အရီးစာခေးလေး ပြောသွားတာ သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်… နောက်ထပ် ဘီစီကလဲ ပေးမြတော့ဝူး…
ကျေးဇူးပါ အရီးလေး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟိ ဟိ။
ဒီ လူကြီး တွေ ကို ဘက်စုံပညာတတ် လို့ မှတ်နေလေသလား ဝါး လေးရဲ့။
အမှန်တော့ ပြောသာပြောရ အစ်မဒုံ ပြောတဲ့ သီဝရီ မရှိ တော့ အေးချမ်းတယ် ဆိုတာ ကတော့ အမှန်တရား ပညာရှိ စကားပါ။
ကိုယ့်မှာတော့ သိသိ နဲ့ အဲဒီသီဝရီ ကြီး ကို စမ်းသပ် မိလိုက်လို့ ကိုယ့်ဘွ တောင် ကိုယ်မပိုင် တော့။
စမ်းကြည့် လဲ မှားတယ် တော့ မခေါ်ပါဘူး။
သက်လုံတော့ ကောင်းပစေ အေ။
အဲ့ မင်းသား ရဲ့ စရိုက် လေးများ အကြမ်းဖျင်း သိခွင့်ရလေမလား။ သိချင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အနော့်လို ဗာဂိုပါပဲ အရီး Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နာ မြန်းလားးး
Wow says: နိပဲပေါ့ ဟိုမလောက်လေးမလောက်စားနှစ်ယောက်က စာရင်းကိုမရှိ Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: ဟုတ်လိုက်လေ ဝေါင်းရယ်…။
ဘာမှ မဖြစ်မှတော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့…။
Wow says: နာမယ်ပေးကင်ပွန်းတပ်ခ တစ်ဝိုင်းပေးဘာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: အချစ်ဆိုတာ Tap Water လို လှည့်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ သောက်လို့မရတာ အမှန်ပဲဗျ
Wow says: ချစ်ခြင်းဆိုဒါ ၀က်အူချောင်းမှ မဟုတ်ပဲ မဏိစန္ဒာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -ဘာမှမဖြစ်ရင်..ဘာမှမဖြစ်ဝူးဆိုတာထက်
-ဘာမှမလုပ်လို့ ဘာမှမဖြစ်တာလို့ ထင်ရပါတယ်..မမဝေါင်း
-အိုက်တော့ ဘာဘဲဖစ်ဖစ် တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်..
-မိန်းမတို့ လုံ့လ..သေခါမှ လျှော့ရမယ် ပေါ့ခညာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဟုတ်တယ်… ကျီပြာလေးပြောတာမှန်တယ်… ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် လုပ်ပစ်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1064
ဗုံဗုံ says: အားအားယားယား ချစ်အနေဗူး…
ကွကိုယ်စားဖို့သောက်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ..
Wow says: အာ့လဲ မှန်တာပဲ စားဖို့က အရေးအကြီးဆုံး…
အော့ တူမရေး ရွာက နွားကြီး ကင်စားဂျမယ်.. Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ အချစ်ဆိုတာ အရာရာကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်းရှိတာပဲ